AKWERKWỌ ANDROID: Kpachara anya maka StrandHogg 2.0 Malware CVE-2020-0096 | Gam akporosis
Sistemụ arụmọrụ ọ bụla dị na-enweghị nsogbu, otú ahụ bụ A gam akporo nke Google. Ọ bụ ezie na nsogbu ndị ahụ adịchaghị na nso nso a, ọ dị mma mgbe niile ịmara ihe ha bụ na otu ha si emetụta igwe anyị anaghị arụ ọrụ mgbe niile n'ọtụtụ ọnọdụ.
Google dọrọ aka ná ntị nke a nsogbu ọhụụ a maara dị ka CVE-2020-0096 a na-akpọ ya StrandHogg 2.0 nke ụlọ ọrụ Norwegian Promon, nke ga-abụ ụdị nke abụọ nke egwu a maara nke ọma nke pụtara na Disemba afọ gara aga. Ọ nwere ọtụtụ myirịta na ha bụ ndị siri ike na-arụ ọrụ na-atọhapụ a kwachie.
1 Nzụkọ StrandHogg (2019)
2 Nke a bụ malware ọhụụ na nke dị egwu StrandHogg 2.0 CVE-2020-0096
3 Chebe onwe gị na StrandHogg 2.0
4 Ngwaọrụ gam akporo m nọ n'ihe egwu
Nzụkọ StrandHogg (2019)
Achọpụtara StrandHogg dị ka adịghị ike nke sistemụ na mbido ọnwa Disemba, na-emetụta ọtụtụ ntanetị gam akporo ma na-ekwe ka ngwa ndị ziri ezi ga-enweta site na malware. N'ọtụtụ oge, achọpụtaghị enyemaka ahụ, ọ metụtara nsonye 6 ruo 10, enwere malware n'oge ahụ nke jiri nsogbu ahụ rụọ ọrụ n'onwe ya na-enweghị mkpa ikikere mgbọrọgwụ.
N'oge ahụ ruo na ngwa 36 mebiri, ha nwere koodu ọjọọ nke na-etinye Android na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa 500, ọtụtụ ole na ole jiri ndị ọrụ. Ọ bụrụ na onye hacker jidere StrandHogg, ọ nwere ike ịrụ ọrụ dịgasị iche iche, gụnyere ịnwe onye ahụ site na igwe okwu, gụọ ma zipu SMS, nweta kọntaktị, ndekọ mkparịta ụka, nweta Osisi, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Nke a bụ malware ọhụụ na nke dị egwu StrandHogg 2.0 CVE-2020-0096
StrandHogg 2.0 na-eburu nsonaazụ yiri ya, ọ bụ ezie na ọ na-eji usoro dị iche. Kama iji ọtụtụ arụ ọrụ nke gam akporo, nsogbu ọhụụ a na-eji ọrụ akpọrọ mirroring, usoro nke ga-ekwe ka ngwa ngwa iji kpebie ime ka ndị ọzọ zoro ezo.
Ndị na-agba ọsọ nwere ike iji ngwa ọrụ arụnyere na ngwaọrụ gị iji nweta ikike iji nweta data nkeonwe, ha nwedịrị ike ịwakpo ọtụtụ njedebe gam akporo n'otu oge ahụ, nke gara aga abụghị ihe karịrị otu ọgụ kwa oge. Na nke a, ohere na-aghọ otu na nke a, ha nwere ike ịnweta SMS, onyonyo, ọnọdụ GPS, nledo na ese foto na omume ndị ọzọ dị iche iche.
Chebe onwe gị na StrandHogg 2.0
N'okwu a, ọ dị mkpa inwe ọgụgụ isi ka a ghara ịchụ nta site na nsogbu a, oge niile Google weputara nkwanye maka gam akporo. Otu n'ime ndụmọdụ abụghị ibudata ngwa site na ibe na mpụga Google Play Store ma ọ bụ nweta porn peeji nke nwere ike imebi ekwentị gị na data gị.
Nkwado n'ụdị ikpe a bụ izere ibudata ngwa enyo, yabụ tupu ibudata otu, lelee ma ngwa ahụ bụ nke ụlọ ọrụ ama ama ma na-eche mgbe niile maka ngwaọrụ ndị na-ekwe nkwa ime ka ekwentị gị nwee nchebe.
Ngwaọrụ gam akporo m nọ n'ihe egwu
StrandHogg 2.0 CVE-2020-0096 anaghị emetụta ụdị gam akporo kachasị ọhụrụ, ma ee nsụgharị ndị gara aga nke gam akporo, nke dịka Google si arụnyere na 91,8% nke igwe. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya idobe ngwaọrụ na mmelite ndị nrụpụta ọhụụ.
Google kwere nkwa ịmalite mmelite ahụ tupu njedebe nke Mee ma ka nwere ọtụtụ ụbọchị iji dozie nsogbu a nke ga-emetụta ọtụtụ ngwaọrụ n'ihi na ha enweghị ụdị gam akporo ndị a na-adịbeghị anya.
Isi: Europa Press
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » AKWERKWỌ ANDROID: Kpachara anya maka StrandHogg 2.0 Malware CVE-2020-0096
ZTE Axon 11 SE na-agbapụ kpamkpam tupu ewetara ya